Mitadiava solontena iray amin'ny antsasaky ny maha-olombelona, ​​izay tsy te-hanana legioma mamy sy mahafinaritra, mety tsy ho vita mihitsy. Mba hahatratrarana vokatra tsara dia tsy maintsy manao fanazaran-tena matetika ianao. Raha tsy misy fotoana tokony hampiharina ao amin'ny gym, dia mampihatra any an-trano.
Ny fomba tsara indrindra fampiharana
Ny fampiofanana dia tokony atao in-droa isan-kerinandro, manomboka amin'ny antsasak'adiny ary mitondra ny fotoana maharitra mandritra ny ora iray. Mba hahatratrarana ny fahombiazana dia tokony haverina amin'ny fomba maro samihafa ny fampiharana, ary atao in-12-15. Atombohy, toy ny mahazatra amin'ny fampakaram-bary, mba hampafana ny hozatra.
Ny fampiharana legana mahomby:
Tontolon'ny tsipika . Mazava ho azy fa mahomby ny sit-ups, saingy manome soso-kevitra izahay amin'ny fanaovana dika kokoa kokoa. IP - mitsangana, mihazona ny tananao. Etsy an-danin'izany, afaka manamboatra lavaka ianao . Ny asa - miondrika eo anoloan'ny lohalika dia tsy mamaritra ny mari-pahaizana marina, fa ny tànana kosa dia miverina hiverina haingana. Avy eo dia manaova sangisangy mafy, manandratra ny tananao. Aorian'io dia asaivo mividy mpitsangatsangana hafa, mitsangatsangana amin'ny tongotra mahitsy.
Fanafihana an-tsokosoko . Fampiharana lehibe ho an'ny tongotra ho an'ny tovovavy, izay ahafahanao mahazo entana tsara. IP - mitsangana mahitsy ary maninjitra ny tananao eo anoloanao Tanjona - Miaraka amin'ny tongotra ankavia dia manao dingana goavana amin'ny sisiny, miondrika eo anoloan'ny fehiny dia tsy tonga mifanaraka amin'ny ety. Aorian'io dia mitsangàna, ataovy amin'ny tongotra havia eo ankavanana. Amin'ny ankapobeny, mandritra ny fampiasana ny tongotra havanana dia tsy mihetsika mihitsy. Miverena any amin'ny IP fotsiny ary avereno ao amin'ny lalana hafa.
Makhi . IP - mijoro eo amin'ny voditongotra rehetra, mametraka ny tananao eo amin'ny soroka. Atandràtao ny tongony havanana, manindrona ny lohaliny mandra-paha-90 degrees ny elanelana. Zava-dehibe ny manondro ny voditongotr'ilay volon-koditra, ary ny tongotra havia dia miankina amin'ny tongotra. Atraho ny tongotra havanana 15-20, ary tazony eo amin'ny toerana ambony ho 5-10 segondra. ary afeno izany.
Church of Hateigskirkja
Fety amin'ny fomba ofisialy "Moulin Rouge"
Samsa ao anaty lafaoro
Teknolojian'ny famakiana haingana
Vaton'i Gienesh amin'ny tanany
Fahaverezan'ny zon'ny ray aman-dreny
Soup miaraka amin'ny baoty potato
Nahoana no manonofy momba ny fanadiovana trondro?
Kim Kardashian dia namoaka resaka nifanaovan'ny vadiny sy Taylor Swift
"Medovik" no tsiambaratelo tsotra indrindra amin'ny mofomamy mahavariana amin'ny fety rehetra!
Charlize Theron dia niakanjo toy ny zazavavy